Siyaasa Itoophiyaa: Wal qoccoluu paartilee ADWUI fi egeree isaa - BBC News Afaan Oromoo
Gamaa gamanaa quba walitti qabuu fi wal yakkuun dhaabbilee miseensa 'ADWUI' lamaan hegeree dhaabichaafi biyyattii yaaddoo keessa kan buusudha jedhu namoonni siyaasaa.
Addi Bilisa Baasaa Ummata Tigiraay 'TPLF' ibsa Roobii galgala baaseen 'yaalii fonqolcha mootummaa' naannoo Amaaraatti mudateefi rakkoo nageenyaa guutummaa biyyattii keessa jiruuf Amaaraa Demokratiik Paartii (ADP) qeeqe.
ADP'n humnoota of-tultotaaf dahoo ta'ee rakkinni kun akka uumamu taasise, kanaaf of qoratee dhifama gaafachuutu irra jiraata jedhe.
'ADP'n gama isaatiin 'TPLF' badiifi haala rakkisaa biyyattiin keessa jirtuuf itti gaafatamaa ta'ee osoo jiruu, badii ofii dhoksachuuf quuqamaa ta'ee dhiyaate jechuun ibsa baaseera.
"Rakkoo nageenyaa naannoo Amaaraa fi naannoolee ollaa gidduutti uumaman duuba goree akka nu waraanaa ture ni beekna, ragaa qabatamaa hedduus ni qabna," jedha ADP'n.
Paartileen lamaan sadarkaa kanatti ifatti gadi bahanii yoo wal qeeqan kun isa jalqabaati.
Kuni hangam rakkoon gadi fagoon gidduu isaanii akka jiruufi hegereen biyyattiis rakkoo keessa jiraachuu mul'isa jedhu Pirofeesar Mararaa Guddinaa.
Pirofeesar Mararaan ammaan duras 'saba biyya kanaa hogganuu caalaa, paartii isaa hogganee gara jijjiirama geessun rakkoo jaba MM Abiy Ahimad eeggatu' akka ta'e dubbatanii turan.
Waldhabdeen kun kanuma duraan gidduu isaanii turedha kan jedhan namni siyaasaa kun, maddi isaa galma waloo qabaachuu dhabuudha jedhu.
"Jijjiirama kana attamitti deemsifnaa, hammam deemsifna kan jedhu osoo walii hin galiin itti galan natti fakkaata tapha kanatti" jedhu.
ADWUI'n kophaa ofii jijjiirama kana oofuuf filachuun isaanumayyuu deebisee wal dhabsiisaa jira kan jedhan pirofeesar Mararaan, akka kanaan yoo itti fufan wal diiguu danda'u jedhu.
ADWUI'n akka paartii duraaniiti jira jechuun ni rakkisa kan jedhan xinxalaan siyaasaa Dr Adam Kaasee wanti haaraan amma umame hin jiru, ''yoo jiraate 'TPLF' ejjannoosaa ifa taasisuudha'' jedhu.
'TPLF' addicha keessaa bahuu akka filannoo tokkootti dhiyeessuun waan haaraa akka ta'e himu.
''Kunis wayita ADWUI'n adda ta'urraa gara paartii tokkottin jijjiirama jechaa jiruutti umamuunsaa egeree addichaarratti gaaffii akka kaafnu nu taasisa'' jedhu.
''Haala kanaan dhimmi ADWUI akka adda tokkootti waliin itti fufuu shakkisiisaadha'' jedhaniiru Dr Adam.
ADWUIn tokko taana jechuun dhugoomaa laata?
Paartileen ADWUI erga daandii mataasaanii hordofuu eegalanii bubbulaniiru kan jedhan pirofeesar Hizqi'eel Gabbisaa, "haala addicha keessa jiru yoo ilaalamu carraan waliin hojjachusaanii kan hir'ataa dhufe fakkaata," jedhu.
Ta'us biyyattiin gara filannootti adeemaa kan jirtu waan ta'eef, wal danda'anii hanga filannootti waliin turuu danda'u yaada jedhuus qabu.
Yaadni ADWUI'n adda ta'uu dhiisee paartii tokko ta'a jedhame garuu gonkumaa dhimma hin taanee ta'usaa Pirofeesar Hizqi'eel ni dubbatu.
ADWUI'n dhaaba mootummaa uumee biyya bulchaa jiru hanga ta'etti wal diiguun isaanii biyyarratti dhiibbaa guddaa qabaachuun isaa wal nama hin gaafachiisu jedhu.
"Raayyaa Ittisa Biyyaa dabalatee qaamoleen tikaafi nageenyaa harka mootummaa jiru. Mootummaa jechuun ammoo paartilee afranidha."
Paartileen gargar hiramnaan, humni waraanaafi nageenyaas ni hirmamu, "akka saraawitii Somaaliyaa ta'uu danda'u" jedhan.
"Kophaa biyya bulchina jedhanii ofumaa deebi'anii wal nyaachuun isaaniifis sabaafis gaarii miti," jedhu.
"Achuma keessaa luka wal harkiisuurra, paartilee siyasaa gurguddoo waliinis, saba waliinis marii bal'aa waliigaltee biyyaalessaa uumuu danda'u gochuun barbaachisaadha.
"Akkas yoo ta'e hundi kenya walitti dhufnee jijjiirama kana akka ta'utti gargaaruu dandeenya," jedhan pirofeesar Mararaan.
'TPLF' ADWUI keessaa bahuuf filannoo dhiyeessuun isaa sirrii akka hin taane kan dubbatan namni siyaasaa Obbo Lidatuu Ayyaaleewu, "qaama rakkoo kanaa gatii ta'ef qaama furmaataas ta'u qaba" jedhu.
"Yaalii fonqolchaa' dabalatee rakkoolee biroof furmaatni filannoodha"
Rakkoon amma biyyattii keessa jiru erga dhaabni 'TPLF' aangoo irraa bu'e kan uumame fakkeessuuf yaaluun dogongora duriirraa barachuu dadhabuu isaanii agarsiisas jedhu.
Dhaabni 'TPLF' rakkoon biyyattiin keessa seente dhuguma isa yaaddessa yoo ta'e, komiidhaan osoo hin taane paartii keessatti qabsoo gochuu, garaa bal'achuu, kaan wajjiin hojjechuuf qophii ta'uufi rakkoowwan bu'uuraa biyyattii asin gahanif gaheen isaa guddaa ta'u amanuun rakkoo kana hiikuun kan danda'amu jedhu Obbo Lidatuun.
"Miseensonni ADWUI bu'aa ofiirra bu'aa biyyaaf dhimmamu taanaan ummata waggaa 27 guutuu miidhan tajaajiluuf dhugumaan gaabbaniiru taanaan dhiisanii bahu osoo hin taane yeroon akka tokkotti dhaabbachuu qaban har'a."
Xinxalaa siyaasaa kan ta'an Obbo Garasuu Tufaa immoo ibsa dhaabbileen lamaan baasan qeequun waan ummata walitti buusurraa of qusachuu qabu jedhaniiru.
''Ibsa ummata tasgabbessu kallattiifi abdii kennu baasurra akka dargaggeessaa waliif haa baanu jechuun ibsa baasuun isaanii wanta lafa jiru irraa fagoo akka jiran agarsiisa,'' jedhan.
Barsiisaa Yunvarsiitii Finfinnee Dr. Daanyaachew Asaffaa ammoo paartileen kunneen duraanuu adda bahaniiru waan ta'eef kan nama ajaa'ibu miti. Tigiraay rippabilikashee qabattee qophaashee jirti. Yakkamtootas dabarsee hin kennu jechuun daangaashee cufattee akka biyya biraatti haasa'aa jirti. Garuu baajata mootummaa federaalaa isaaniif ramadame eeganii fudhatu jedhan Dr. Daanyaachew.
"Egaa mootummaan lama yeroo tokkotti biyya tokko keessa waan hin jiraanneef qulqulleessuu kan barbaachisu ni qulqullaa'a.
Raayyaan hanga ammaa tokkummaa isaa eeggatee jira waan ta'eef gaariidha. Caasaa Itoophiyaaf dursa kennuti keessa jira waan ta'eef gaariidha," jedhu hayyuun kun.
Aanga'oonni fi hayyoonni 'ijaarsa biyyaa' irratti mari'ataa jiru